မျောက်ကျောက်ရောဂါက လူထုကူးစက်မှုအန္တရာယ် “အလွန်နည်းပါး” ဟု ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ပြော - Xinhua News Agency
မျောက်ကျောက်ရောဂါ ကူးစက်ခံရသော ကလေးငယ်တစ်ဦး၏ ဓာတ်ပုံအား အမေရိကန်နိုင်ငံ ရောဂါထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေး (CDC) ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- Courtesy of CDC)
လော့စ်အိန်ဂျလိစ်၊ မေ ၂၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် မကြာသေးမီက မျောက်ကျောက်ရောဂါ (monkeypox) လူအစုလိုက်အပြုံလိုက် ကူးစက်မှုဖြစ်ပွါးခြင်းသည် သိပ္ပံပညာရှင်များထံမှ ကြီးမားသော စိုးရိမ်ပူပန်မှု ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် မျောက်ကျောက်ရောဂါသည် တစ်ချိန်တည်းတွင် လူထုကူးစက်မှုအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားရန်မှာမူ “တော်တော်လေးနည်းပါး” ကြောင်းနှင့် “အထိတ်တလန့်ဖြစ်ရန်မရှိကြောင်း” ကူးစက်ရောဂါ ပြန့်ပွားခြင်းနှင့် ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဦးဆောင်ပညာရှင်က ပြောခဲ့သည်။“ဒီရောဂါရဲ့ အခြေခံကို ရရှိဖို့နဲ့ ဘာဆက်ဖြစ်နေလဲဆိုတာကို နားလည်ဖို့လိုပေမဲ့လည်း မျောက်ကျောက်ရောဂါ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွါးမှုနဲ့ ကပ်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ကတော့ တော်တော်လေးဖြစ်နိုင်ဖွယ်မရှိပါဘူး။ ဖော်ပြထားတဲ့ နေရာဒေသတွေမှာ လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြစ်ပွားမှု အနည်းငယ်အဖြစ်သာ ကျန်ရှိနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်” ဟု အမေရိကန် အပူပိုင်းဒေသ ဆေးဝါးနှင့် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ Daniel Bausch က ဆင်ဟွာသတင်းဌာနနှင့် မကြာသေးမီက တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန် အပူပိုင်းဒေသ ဆေးဝါးနှင့် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့ (ASTMH) ဥက္ကဋ္ဌ Daniel Bausch အား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- Courtesy of LSHTM)
အမေရိကန် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးစင်တာ (CDC) မှ သိပ္ပံပညာရှင်များက မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနနှင့်အတူ ကနေဒါနိုင်ငံမှ အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးနောက် မေ ၁၈ ရက်တွင် မျောက်ကျောက်ရောဂါ စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့သော အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးကို စစ်ဆေးရန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
နယူးယောက်စီးတီး (NYC) ရှိ လူနာတစ်ဦးတွင် မျောက်ကျောက်ရောဂါပါဝင်သော ဗိုင်းရပ်စ်အနွယ်ဝင်ဖြစ်သည့် orthopoxvirus စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း NYC ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူများက မေ၂၀ ရက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၌ ကြေညာထားသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်သည် “CDC စစ်ဆေးမှုလုပ်ဆောင်နေတာ အတည်မပြုမီတိုင်အောင် “ရောဂါဖြစ်နိုင်ဖွယ်” အဖြစ် ကုသထားပြီး လက်ရှိတွင် လူနာကို သီးသန့်ခွဲခြားထားပါတယ်” ဟု ထုတ်ပြန်ချက်က ဆိုသည်။
ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူများက မျောက်ကျော်ရောဂါ “ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိမှု” ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်းနှင့် ယင်းမှာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရောဂါကူးစက်မှုများ ဆက်လက်မြင့်တက်နေသည့်ကြားမှ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် တတိယမြောက် ဗိုင်းရပ်စ်တွေ့ရှိခြင်းဖြစ်ဖွယ်ရှိကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကို Broward ကောင်တီတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးနေခြင်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာခရီးသွားလာမှုနှင့် ဆက်စပ်ကာ ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖလော်ရီဒါ ကျန်းမာရေးဌာနအရ သိရသည်။
CDC သည် ဥရောပတိုက်နှင့် မြောက်အမေရိကတိုက် အပါအဝင် ပုံမှန်အားဖြင့် မျောက်ကျောက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားလေ့မရှိသော နိုင်ငံများစွာ၌ မေလဆန်းပိုင်းမှ မေလလယ်ပိုင်းအတွင်း မျောက်ကျောက်ရောဂါ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြစ်ပွားမှုကို ခြေရာခံနေကြောင်း သိရသည်။
“သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအလုပ်သမားတွေက ကူးစက်ရောဂါဗေဒဟာ ကျွန်တော်တို့တွေ့ဖူးတာထက် ကွဲပြားနေတာကြောင့် အကြီးအကျယ်ဖြစ်သွားမှာကို စိုးရိမ်နေကြတယ်” ဟု Bausch က ဆင်ဟွာသို့ ပြောခဲ့သည်။
မျောက်ကျောက်ရောဂါသည် အဖြစ်နည်းသောရောဂါဖြစ်သော်လည်း ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ပြင်းထန်သောဖျားနာမှုဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ အစပိုင်းတွင် တုပ်ကွေးဖျားနာသကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး ပြန်ရည်ကြိတ်များ (lymph nodes) ရောင်ရမ်းကာ မျက်နှာနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်သို့ လျင်မြန်စွာပျံ့နှံ့သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း CDC အရ သိရသည်။
မျောက်ကျောက်ရောဂါသည် နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်ကြာ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုမရှိဘဲလျက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ၌ ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ထို့နောက် နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားသူ ၄၅၀ ကျော်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအနေဖြင့်မူ ၈ဦးထက်မနည်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မျောက်ကျောက်ရောဂါသည် အနောက်နှင့် အလယ်အာဖရိကတို့တွင် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော ရောဂါဖြစ်ပြီး ကြွက်ကဲ့သို့သော နို့တိုက်တွားသွားသတ္တဝါငယ် အမျိုးအစား၌ အရင်းခံလာခဲ့သည်။ အဆိုပါ ရောဂါများသည် နိုင်ဂျီးရီးယားနှင့် ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံတို့တွင် ရံဖန်ရံခါဖြစ်ပေါ်လာတတ်ကြောင်း လန်ဒန် ရောဂါကာကွယ်ရေး တစ်ကိုယ်ရေ ရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးနှင့် အပူပိုင်းဆေးပညာကျောင်း၏ ပါမောက္ခလည်းဖြစ်သူ Bausch က ပြောခဲ့သည်။
တစ်ခါတရံတွင်မူ အာဖရိကအပြင်ဘက်မှ ခရီးသွားလာသူများထံမှ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအနေဖြင့် ၂၀၀၃ ခုနှစ်က အမေရိကန်တွင် ကြီးမားသောရောဂါဖြစ်ပွားမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဂါနာနိုင်ငံမှ ရောဂါကူးစက်ခံရသောကြွက်များ တင်သွင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“လက်ရှိအခြေအနေမှာ ပုံမှန်မဟုတ်တာက ပထမအချက်အနေနဲ့ ဥရောပနဲ့ မြောက်အမေရိက စတဲ့ တိုက်ကြီးနှစ်တိုက်မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံများစွာမှာ အတည်ပြုလူနာတွေ တစ်ပြိုင်နက်တည်း တွေ့ရှိရတာပါပဲ။ ဒုတိယအချက်ကတော့ အဲဒီလူတွေက ဘယ်လိုကူးစက်ခံခဲ့ရလဲဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားမလည်နိုင်သေးပါဘူး” ဟု Bausch က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
အာဖရိကသို့ ခရီးသွားခြင်းနဲ့ ရှင်းလင်းသောချိတ်ဆက်မှုမရှိခြင်းသို့မဟုတ် အတည်ပြုလူနာများအားလုံးက ထိုနေရာများသို့ ခရီးသွားရောက်မှုလည်းမရှိသလို တင်ပို့ထားသော တိရစ္ဆာန်များနှင့် ထင်ရှားသော ဆက်စပ်မှုလည်းပဲမရှိကြောင်း Bausch က ဆိုသည်။
သိပ္ပံပညာရှင်များကလည်း အဆိုပါ ပဟေဠိကို အတူတကွအဖြေရှာရန် ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်မှာ ရောဂါကူးစက်ခံရသူ သို့မဟုတ် အာဖရိကမှ ရောဂါကူးစက်လာသူတစ်စုံတစ်ဦးက လူစုလူဝေးအတွင်း ရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် လူပေါင်းများစွာနှင့် ထိတွေ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကာ ၎င်းလူများက နေအိမ်အသီးသီးသို့ ပြန်သွားခဲ့ကြပြီး ကူးစက်မှုကွင်းဆက်များဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း ၎င်း၏အမြင်ကို ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
မျောက်ကျောက်ရောဂါကူးစက်မှုအား ကိုဗစ်-၁၉ (COVID-19) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ရပါက မျောက်ကျောက်ရောဂါပိုးဗိုင်းရပ်စ်သည် လူသားအချင်းချင်း အနာများ သို့မဟုတ် လူတစ်ဦးအသုံးပြုခဲ့ပြီးသော အဝတ်အစားများ သို့မဟုတ် အိပ်ရာများကို တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းနှင့် ဖျားနာနေစဉ် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အမှုန်အမွှားများမှတစ်ဆင့်သာလျှင် ကူးစက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း Bausch က ဆိုသည်။
အဆိုပါ ရောဂါသည် အလွယ်တကူ ကူးစက်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း၊ ကူးစက်ရန် အချိန်ယူရလေ့ရှိကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
“ထိတ်လန့်စရာတော့မဟုတ်ပါဘူး” ဟု Bausch က ဆိုသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် လူတစ်ဦးသည် ရောဂါပိုးရှိသူနှင့် ထိတွေ့မှုရှိခြင်း သို့မဟုတ် အာဖရိကသို့ ခရီးသွားခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုပါက ရောဂါကူးစက်နိုင်ခြေ လွန်စွာနည်းပါးကြောင်း၊ ကျေးလက်ဒေသများတွင် ကြွက်များ၊ ၎င်းတို့၏ အညစ်အကြေးများနှင့် ထိတွေ့မှုရှိခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် မျောက်ကျောက်ရောဂါကူးစက်မှုအတွက် သက်သေ၊ စိတ်ချရသောကုသမှုများ မရှိသေးကြောင်း CDC အရ သိရသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် မျောက်ကျောက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ထိန်းချုပ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကျောက်ရောဂါကာကွယ်ဆေး၊ ဗိုင်ရပ်စ်သတ်ဆေးများနှင့် ကိုယ်ခံအားမြှင့်တင်ပေးသောကာကွယ်ဆေးများကို အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း အေဂျင်စီက ပြောကြားခဲ့သည်။
ကျောက်ရောဂါအတွက် ထုတ်လုပ်ထားသော ကာကွယ်ဆေးများသည် မျောက်ကျောက်ရောဂါကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ပေးနိုင်ကြောင်း Bausch က ဆင်ဟွာသို့ပြောခဲ့သည်။ “သို့သော်လည်း ဒီကာကွယ်ဆေးက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တော့မရသေးပါဘူး။ ဈေးကွက်မှာ ပေါပေါများများမရှိသေးသလို ပြည်သူတွေကလည်း ဝယ်လို့မရသေးပါဘူး”
အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်၏ အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေး ဂျိတ်ဆူလီဗန် (Jake Sullivan) က အမေရိကန်တွင် ကာကွယ်ဆေးများ ဖြန့်ဖြူးပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မေ ၂၂ ရက်က သတင်းထောက်များအား ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဒီနေရာမှာ ကာကွယ်ဆေးက ထိတွေ့မှုမြင့်မားတဲ့သူတွေအတွက်သာ ရည်ညွှန်းထားတာပါ။ အထူးသဖြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုမလုပ်နိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးတွေအတွက်ပေါ့” ဟု Bausch က ဆင်ဟွာသို့ ပြောခဲ့သည်။
ကာကွယ်ဆေးသည် အများပြည်သူအတွက် ထောက်ခံခြင်းမပြုထားကြောင်း ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
နိုင်ငံအတွင်းရှိ ကျန်းမာရေးပံ့ပိုးကူညီသူများအနေဖြင့် မျောက်ကျောက်ရောဂါရှိပြီး အနီစက်များထွက်ကာ ဖျားနာနေသော လူနာများနှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့ကခရီးသွားထားခြင်းရှိမရှိ သို့မဟုတ် မျောက်ကျောက်ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ခြေအန္တရာယ်ရှိမရှိနှင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းရှိမရှိိကို ဂရုမထားဘဲ သတိထားကြရန် CDC က တိုက်တွန်းထားသည်။
မျောက်ကျောက်ရောဂါရှိသူတစ်ဦးဦးနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုရှိသူများအားလုံးကို သတ်မှတ်ကာလမကုန်ဆုံးမီတိုင်အောင် နေအိမ်၌ သီးသန့်ခွဲခြားနေထိုင်ခြင်း အပါအဝင် စောင့်ကြည့်သင့်ကြောင်း Bausch က ဆိုသည်။
မေ ၁၉ ရက်အထိ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ အဆိုအရ မျောက်ကျောက်ရောဂါရှိကြောင်း ဓာတ်ခွဲခန်းအတည်ပြုထားသူ ၉၂ ဦးနှင့် ရောဂါစစ်ဆေးမှုလုပ်ဆောင်နေဆဲ သံသယလူနာ ၂၈ ဦးတို့သည် မျောက်ကျောက်ရောဂါဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်ပွားလေ့မရှိသောနိုင်ငံ ၁၂ နိုင်ငံမှ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
#Monkeypox, #US, #Infection, #Xinhua, #Myanmar, #XinhuaMyanmar, #မျောက်ကျောက်ရောဂါ, #အမေရိကန်, #ကူးစက်မှု, #ဆင်ဟွာ, #မြန်မာ, #ဆင်ဟွာမြန်မာ
Source: Xinhua| 2022-05-24 04:21:45|Editor:
LOS ANGELES, May 23 (Xinhua) — The recent clusters of monkeypox infections in the United States and around the world have drawn great concern from scientists. But the risk of monkeypox to the general public is “extremely low” at the moment, and there is “no cause for panic,”aleading epidemiologist has said.
“At this point, the vaccine would only be indicated for high-risk contacts, including healthcare workers who did not take appropriate precautions,” Bausch told Xinhua.
According to the World Health Organization, as of May 21, 92 laboratory-confirmed cases and 28 suspected cases of monkeypox with investigations ongoing had been reported from 12 countries that are not endemic for monkeypox virus. ■
Photo 1 : Undated photo currently posted on the website of the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) showsachild affected with monkeypox. (Courtesy of CDC)
Photo2: Official photo of Daniel Bausch, president of the American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH), as posted on the website of the London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM). Bausch is alsoaprofessor at LSHTM. (Courtesy of LSHTM)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ၅ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးတွင် မျောက်ကျောက်နှင့်တူသောလက္ခဏာတွေ့ရှိ၊ ရောဂါစစ်ဆေးစမ်းသပ်ရန်နမူနာပေးပို့ထား
စပိန်နိုင်ငံတွင် မျောက်ကျောက်ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၁၂ ယောက်ထပ်မံတွေ့ရှိ